မုံရွာ၊ မဇ္ဈိမ။ ။ မြန်မာ - အိန္ဒိယ နယ်စပ် တမူးမြို့နယ် အောင်ဇေယျမြို့ သစ်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၁ရက် နံနက် ၁နာရီ ၀၅ မိနစ်ခန့်က ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားသည်ဟု သနန်မြို့သစ်၊ မြို့နယ်ခွဲ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ရုံးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။လက်ရှိတွင် ဖောက်ခွဲသူများ နေထိုင်နိုင်သည်ဟု ယူဆရသည့် နေရာများသို့ ခလရ(၈၇)တပ်မှ ဦးစီး၍ အောင်ဇေယျနယ်မြေရဲစခန်းမှူးတို့က စုံစမ်းလျက်ရှိပြီး ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အိမ်ပိုင်ရှင်မှာ ဒေါ်ဝင်းတင်ဖြစ်ပြီး အိမ်ဈေးဆိုင်နှင့် သူမ၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ပုတို့ဖြစ်သည် ဟု ရဲဌာန၏ မှတ်တမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူအသေအပျောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ မရရှိ ခဲ့သော်လည်း ဒေါ်ဝင်းတင်၏ နေအိမ်အတွင်းရှိ စားပွဲဝိုင်းမှ ဖိုက်ဘာ ထိုင်ခုံ ငါးလုံး၊ မှန်ပြတင်တံခါး ရှစ်ချပ်နှင့် အိမ်းမိုးသွပ်ပြားတစ်ချပ်တို့ ပျက်စီး သွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သူမ၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ပု၏ နေအိမ် လှေကား ခုံများလည်း ပျက်စီးခဲ့သည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်ကလည်း အဆိုပါဒေသတွင် သံကူကွန်ကရစ် သံဘေလီဘောင် တံတားတစ်စင်းအား အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ခုမှ မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲခဲ့သည့်အတွက် တံတား၏ ကိုယ်ထည်အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
မြန်မာပြည် ပြန်စရာမလို့ဘဲ ထိုင်းမှာ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးလို့ရတော့မည်
ထိုင်းနိုင်ငံထဲက ဗီဇာ ၄ နှစ်ပြည့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ ထိုင်းမှာဘဲ ဆက်ပြီး အလုပ် လုပ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်ကို ပြန်စရာမလိုဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံကနေ ဗီဇာသက်တမ်းတိုးလို့ ရတော့မယ်လို့ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အပြောကို ကိုးကားပြီး ထိုင်းအစိုးရအင်တာနက် စာမျက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်နဲ့ ထိုင်းအလုပ်သမား ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနရဲ့ ညွှန်ချုပ် မစ္စတာ ပရ၀စ်ခိန့်ဖွန်တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့က ဘန်ကောက်မြို့မှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပြီး အခုလို ပြောကြားလိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ တွေ့ဆုံမှုမှာ ၄ နှစ် ဗီဇာသက်တမ်းကုန် မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ မြန်မာပြည် ပြန်စရာမလိုဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံထဲကနေဘဲ အထောက်အထားတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်ရေး၊ လက်ရှိ ဗီဇာ ကုန် အလုပ်သမားပေါင်း ၃ သောင်းကျော်အတွက် တနေရာတည်းအပြီး ၀န်ဆောင်ရေးစခန်း ၅ ခုကို ချင်းရိုင်းခရိုင်၊ တာ့ခ်ခရိုင် (မဲဆောက်မြို့နယ်)၊ ကန်ချနဘူရီခရိုင်၊ ရနောင်းခရိုင်၊ ပရကျူတ်ခီရိခန်ခရိုင် (ဆိန်းခေါင်န်ဂိတ်)တွေမှာ ဖွင့်လှစ်ဖို့ ကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါအပြင် အဲဒီဆွေးနွေးချက်တွေကို လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပဖို့ ရှိတဲ့ ထိုင်းဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးမှာ တင်သွင်းဖို့ ရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီးတာနဲ့ထိုင်းပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက ၁ လအတွင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ပေးဖို့ ဖြစ်ပြီး လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မယ်လို့လည်း ထိုင်းအစိုးရ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
စိတ္တဇ ဆေးရုံမှာ စိတ္တဇ ဝေဒနာရှင် လူနာ အမျိုးသမီး တဦးနှင်. အမျိုးသား တစ်ဦးရှိပါသည်။
တနေ. သူတို.၂ယောက် အတူလမ်းလျှောက်နေတုန်း ဆေးရုံရဲ.ရေကူးကန်နားရောက်တော.
အမျိုးသား က ကန်ထဲသို. ခုန်ဆင်းချလိုက်ပါတယ်။
ဒါနဲ. အမျိုးသမီး ကလဲ အလျှင်အမြန်ခုန်ဆင်းပြီးကုန်းပေါ်သို.ဆွဲတင် ကယ်ဆယ် လာခဲ.ပါတယ်။
အမျိုးသမီးရဲ. ကောင်းမွန်တဲ.ပြုမူချက်ကြောင့် စိတ်ပြန်လည်ကောင်းမွန် လာသည်မှတ်ကာ
ဆရာဝန်ကြီး က သူ.အား ဆေးရုံက ဆင်းခွင်.ပေးဖို. ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။
ဆရာဝန် — နေကောင်းလား ခင်ဗျာ။ ခင်ဗျားကို သတင်းကောင်း တခု နဲ့သတင်းဆိုးတခုပြောစရာရှိတယ်ဗျ။
သတင်းကောင်းကတော. ခင်ဗျား ပုံမှန်လူတွေ လို စိတ်ပြန်လည်လာလို.ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ပေးလိုက်မယ်။
သတင်းဆိုးကတော. ခင်ဗျားကယ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားလူနာခုနလေးကပဲ
ရေချိုးခန်းထဲမှာ တံဘတ် နဲ့ ဆွဲကြိုးချပြီး ကိုယ်.ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်သွားရှာတယ်။
အမျိုးသမီး — အော်ဟုတ်လား၊ သူ.ဖာသာသူ အဆုံးစီရင်တာ မဟုတ်ပါဘူးရှင် ၊
ကျွန်မကိုယ်တိုင်သူကို့ ရေတွေ စိုနေလို့ ခြောက်သွားအောင် လှန်းပေးလိုက်ခဲ့တာပါ
အမျိုးဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့(ဗဟို) ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်(၁၁/၂၀၁၃)
၁။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ OIC အဖွဲ့ လာရောက်ခါနီးအချိန်နှင့် လာရောက်စဉ် အချိန်တို့၌ ဆန္ဒပြကန့်ကွက်ပွဲများတွင် တစ်ဖက်ဘာသာအတွက် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သော “သားဖောက်နှုန်းမြန် အစ္စလာမ်၊ တိရစ္ဆာန်ဝါဒ ဆန့်ကျင်ကြ” စသော အသုံးအနှုန်းအပြုအမူများကို သုံးစွဲထားသည်ကို တွေ့မြင်ရပါသည်။
၂။ မိမိ အမျိုး ဘာသာ သာသနာအတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ဟန့်တားမှု၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မူများမှာ မိမိတို့၏ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ပိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများပင်ဖြစ်သည်ကို နားလည်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ထိုသို့ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် မိမိတို့၏ လုပ်ကိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများအရ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် မှု၊ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု စသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
(ဗဟို) အနေဖြင့်လည်း ထောက်ခံအပ်ပါသည်။
၄။ သို့သော် တစ်ဖက်ဘာသာ သာသနာကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သော အပြုအမူ အသုံးအနှုန်းများသည် မပြုလုပ် မသုံးစွဲသင့်သော အရာများဖြစ်ပါသည်။
၅။ တစ်ဖက်ဘာသာ သာသနာ ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သော အပြုအမူ အသုံးအနှုန်းများကို မည်သူမဆို ရှောင်ကြဉ်ရမည်သာဖြစ်ပါသည်။
၆။ ယင်းသို့တစ်ဖက် ဘာသာ သာသနာကို ထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည့် လုပ်ရပ်များသည် မိမိတို့ အမျိုး ဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့
(ဗဟို) ၏ မူဝါဒမဟုတ်ကြောင်း အတိအလင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။
၇။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများအားလုံးအနေဖြင့် ယင်းအပြုအမူများကို ဂရုပြုရှောင် ကြဉ်ကြပါရန်နှင့်(လုံးဝမပြုလုပ်ကြပါရန်) အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို)အထက်ပါ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အား အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ပါသည်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟို)
နေ့စွဲ-၂၀၁၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်။
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀
အာဏာပိုင် မြေနှင့် ဆိပ်ကမ်း(အရှေ့ပိုင်း)ရုံးရှီ အလူမီနီယံ
ဘောင်ကွပ် မှန်တံခါး ၂ ချပ် ပျက်ဆီးသွားကြောင်း ရန်ကုန်
တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
အဆိုပါ ရုံးရှေ့လမ်းမပေါ်၌ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ ည
၁၂နာရီ မိနစ် ၃၀ တွင် ယာဉ်မောင်းဝင်းမြင့် နိုင်မောင်းနှင်
လာသော အငှားယာဉ်သည် လမ်းပေါ်၌ ဘောလုံးကန်နေ
သူများ အန္တရာယ်ဖြစ်အောင် အကြိမ်ကြိမ်ကွေ့ပတ်မောင်း
၎င်းယာဉ်မောင်းပါ ၂ဦးနှင့် ဘောလုံးကန်နေသည့်
ဇင်သူဟိန်း စကားများကြရာမှ ဇင်သူဟိန်းနှင့် အဖွဲ့မှ
ခဲဖြင့်ပစ်ပေါက်၍ ၀င်းမြင့်နိုင်ပါ ၂ဦး သည် ဦးတင်လှထွန်း (ကုန်စည်ကြီးကြပ်ရေးမှူး တတိယအဆင့်)၏ ရုံးအတွင်းသို့ ၀င်ပြေးခဲ့ကြောင်း၊ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများက တားမြစ်ခဲ့
သော်လည်း ဇင်သူဟိန်းနှင့်အဖွဲ့မှ အုတ်ခဲ၊ ကျောက်ခဲတို့ဖြင့် ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် မှန်များပျက်စီးခဲ့ကြောင်း ၎င်းရုံးမှ
ယင်းကဲ့သို့ပျက်စီးသွားသည့်အတွက် ဆိပ်ကမ်း မမစ
(ပ)၃၁၃/၁၃၊ ပုဒ်မ-ပပက၆(၁)ဖြင့် ဇင်သူဟိန်းအား ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီး၊ ကျန်တရားခံများ ဖမ်းဆီး ရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း
ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ရေးသားသူ - ဝေဖြိုး
ဟစ်ဟော့ပ်ဆိုတာ ချောင်းလေးမြောင်းလေးပါဟု လေးဖြူမှ ဝေဖန်ခံခဲ့ဟု သားစိုးဆို
ရော်ကာအဆိုတော်ကြီး လေးဖြူက ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတအား
ချောင်းလေးမြောင်းလေး ပါဟု ဝေဖန်ခဲ့ဖူးကြောင်း
ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော် သားစိုးက People Power သတင်းစာသို့ပြောကြားသည်။
“ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတကိုစိတ်ဝင်စားပြီး စလုပ်တဲ့အချိန် ၁၉၉၈-၉၉ခုနှစ်လောက်မှာ ဦးလေးဖြူပြောတဲ့စကား စိတ်ထဲမှာအရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး လူငယ်သဘာဝ
အရမ်းခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ
အဆိုတော်တွေ အများ ကြီးပေါ်လာသလို ဟစ်ဟော့ပ်
ဂီတကိုလည်း အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေ အများကြီး
ရှိလာတယ်”ဟု ဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော် သားစိုးက
ပြည်တွင်း၌ ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတ စတင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်
အချိန်တွင် အမျိုးမျိုးဝေဖန်ကဲ့ရဲ့မှုများရှိသော်လည်း စိတ်
ထဲမှာမထားဘဲ ၀ါသနာပါရာ ဆက်လုပ်ခဲ့သည့်အတွက် ဟစ်ဟော့ပ်ဂီတပြည်တွင်း၌ ၁၃နှစ်တိုင် ရပ်တည်လာ
ကြပါ။ ပြည်တွင်းမှာ ဟစ်ဟော့ဂီတရဲ့တိုးတက်မှု အနေ
အထားကိုကြည့်ပြီး၊ ဟစ်ဟော့ပ် ဂီတ နှစ် ၄၀ပြည့် အခမ်းအနားမြန်မာနိုင်ငံမှာ လာကျင်းပတာလည်း
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ Hip Hop Forever လို့မြင်ပါတယ်”ဟု သားစိုးက ပြောကြားသည်။
မနေ့က ကုလ သမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေး ကော် မရှင် က မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း က နိုင်ငံ မဲ့ လို့ဆို တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ ကို နိုင်ငံ သား အဖြစ် ချက်ခြင်း ပေး ဖို့ဆုံး ဖြတ် ချက် ချ ခဲ့ တာ ကို ရဟန်း ရှင် လူ ကျောင်းသား ပြည်သူ အပေါင်း က တစ်ညီ တစ်ညွှတ် တည်း ကန့် ကွက် မှာ ဖြစ် ပါတယ်။
iOS users များအတွက် $3.99 တန် Live Score Once app Free ရနေပါပြီ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အားကစားပွဲ တွေရဲ့ ရလဒ်တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်မယ် Live score once ဖြစ်ပါတယ်။ App Store မှာ $3.99 တန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ free ပေးထားပါတယ်
Free ရထားတုန်းလေး မြန်မြန်သွားဒေါင်းလိုက်ပါဦး ---> Live Score Once
ကျိုင်းတုံ အကျဉ်းထောင်တွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေသူ တစ်ဦးကို မူးယစ် ဆေးပေးပို့ရန် လာရောက်စဉ် ဖမ်းဆီးရမိသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာနိုဝင်ဘာလ(၂၀) ရက်(၁၁) နာရီ (၂၀) မိနစ်တွင် ကျိုင်းတုံ မူးယစ်တပ်ဖွဲစု(၂၈) မှဒုရဲအုပ်မြင့်နိုင်စိုး ဦးစီးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ကျိုင်းတုံရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်နေလင်းအောင်၊ ကျိုင်းတုံ အကျဉ်ထောင်မှ ဒုကြီးကြပ်ရေးမှူး နေလင်းထွန်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ကျိုင်းအင်း သူကြီး ဦးစိုင်းဆိုက်၊ ရွာအကျိုးတော်ဆောင်ဦးစိုင်းယုန်တို့သည် သတင်းအရ ကျိုင်းတုံ အကျဉ်းထောင်အဝင်ပေါက်တွင် စောင်းဆိုင်းနေစဉ် ထောင်တွင်း၌ မူး/စိတ်ပုဒ်မ၁၉ (က)/၂၀(က)အရထောင်ဒဏ်(၁၆)နှစ် ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေသော ထောင်ဝင်အမှတ်၊ ကတ/၁၃/၀၀၁၇၂//က၊ လော်ဘာ(ခ) ရာဆာ (၃၈) နှစ်ထံ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့သူ ၎င်း၏သမီးကို ရှာဖွေစစ်ဆေးရာ ၎င်းကိုင် ဆောင်လာ သော ရှောင်လင် မင်းသား တံဆိပ်ပါ ကြွတ်ကြွတ်အိတ် အတွင်းမှ လင်းယုန်ငှက်ရုပ်တံဆိပ် ယိုးဒယားနိုင်ငံလုပ် အိုင်အိုဒင်း ဆားထုတ်အတွင်း ဝှက်၍ သယ်ဆောင်လာသည့် ပလပ်စတစ်အကြည်ဖြင့်ထည့် လျက် WY စာတမ်းပါ လိမ္မော်ရောင် စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား (၁၀)ပြားစီပါ(၃)ထုတ်၊ စုစုပေါင်း(၃၀)ပြား၊ အလေးချိန်(၃)ဂရမ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကာ ဒုရဲအုပ်မြင့်နိုင်စိုး ကတရားလိုပြုလုပ်တိုင်တန်းသဖြင့် ကျိုင်းတုံမြို့မ ရဲစခန်းမှ မယ(ပ) ၅၈/၂၀၁၃၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ၁၅/၁၉(က)အရအမူ၏ဖွင့်အရေးယူထားပြီး ၎င်း၏ မိခင် ဒေါ်ဘူးဒေါ့က အကျဉ်း ထောင်တွင် ပြစ်ဒဏ်ကျခံလျက်ရှိသော ခင်ပွန်းဖြစ်သူ လော်ဘာ(ခ)ရာဆာ ထံပို့ဆောင်ရန် စေလွတ်ခိုင်းကြောင်း စစ်ဆေးသိရသည်။
သမီးဖြစ်သူမှာ ကလေးသူငယ်ဖြစ်သဖြင့် စခန်းမှူး၏ ထိန်းသိမ်းမှုအောက်တွင် ထားရှိနိုင်ရန် ကျိုင်းတုံမြို့နယ် တရားသူကြီးထံတွင် ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံ၍ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုရှိ/မရှိ ကျိုင်းတုံ ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့အပ်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Miss Grand International ပြိုင်ပွဲတွင် ထားထက်ထက် ဆုလေးဆုဆွတ်ခူး
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ Thunderdome တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၉ ရက်က ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခဲ့သည့် Miss Grand International ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာကိုယ်စားပြု ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ထားထက်ထက် သည် ဆုလေးဆုဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ၎င်းဆုများတွင် Miss Popular Vote (The most honorable and invaluable special award of Myanmar), T-Pagent People's Choice Award, Global Beauties Favourite Poll Winner, The Beauty Concept People's Choice Award တို့ဖြစ်ကြသည်။ ယင်းဆု များတွင် Miss Popular Vote ဆုမှာ Miss Grand International ပြိုင်ပွဲမှ ပေးအပ်သည့်ဆုဖြစ်ပြီးပရိ သတ်များကပေးအပ်သည့် မဲအရေအတွက်ပေါင်း ၈၈၉၉ ဖြင့်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဆုကြေးအဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ ကိုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
ထားထက်ထက်က “တကယ်ကို လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အစဉ်အမြဲလှူဒါန်း နိုင်ဖို့အတွက်ဆုကြေး ငွေ အားလုံးကို မတည်ပြီး အများပြည်သူအားလုံးအတွက် အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်””ဟု ဆိုသည်။
ထားထက်ထက်သည် ရိုးရာဝတ်စုံ ဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ရာတွင် ဒီဇိုင်နာမပုံ့၏ အင်းဝခေတ်ဝတ်စုံဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး အကောင်းဆုံး ၁၀ ယောက်စာရင်းတွင် ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပြီး Miss Grand International 2013 ၏ နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင်အယောက် ၂၀ စာရင်းတွင် ပါရှိခဲ့သည်။
ထားထက်ထက်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
ပရိသတ်တွေသိချင်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေရဲ့ အချစ်ရေးတွေထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးလေး ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ အချစ်ရေးလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ အားလုံးသိပြီးသား အဆိုတော်၊ မင်းသားနဲ့ ပြတ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်း အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသံမှမကြားရတော့တဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ‘အချစ်ရေးက မစဉ်းစားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကစ်စိတ်ချမ်းသာချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ချမ်းသာဖို့ကလဲ ကစ်အချစ်ရေးဘက်ကို စဥ်းစားလိုက်ရင် ၊ အဲ့ဒီဘက်ကို အားသာသွားရင် အလုပ်ဘက်မှာ အားလျော့သွားမှာ စိုးတယ်။ ကစ်စဉ်းစားချင်ရင်တောင်မှ မစဉ်းစားမိအောင် နေပါတယ်။ ကစ်ကတော့ အချစ်ဆိုတာက်ို ပူလောင်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ပူလောင်တဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ပဲကြုံဖူးလို့နေမှာပါနော်။ အေးချမ်းတဲ့အချစ်မျိုးကိုလဲ မရှာတော့ပါဘူး။ သူ့အလိုလိုကံပါရင် ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကစ် ရဲ့ အချစ်ရေးကတော့ ဘာမှမရှိပါဘူး။ အရင်အတိုင်းပါပဲ။
ဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားစရာမရှိပါဘူး’တဲ့။ ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့သူမက ‘ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်တွေ ကစ်ကို ချစ်ကြ၊ အားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ရတယ်ဆိုတာလဲ တကယ်ပင်ပန်းပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပင်ပန်းခံပြီး ချစ်ပေးကြတဲ့အတွက်၊ အချစ်ခံရတဲ့အတွက် ကစ်အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တွေနဲ့ပဲ ဒီအလုပ်တွေကို အားရှိရှိနဲ့လုပ်နေတာပါ။ ကစ်ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကို ပုံစံတွေပြောင်းပြီး ရိုက်ထားပါတယ်။ ကစ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအသစ်လေးတွေကို ဝေဖန်အားပေးကြပါဦး’လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
ယာဉ်ကျော်တက်ရာမှ (၁၂)ဘီး ဆီဘောက်စာယာဉ်တစ်စီး လမ်းဘေးသစ်ပင်ဝင်တိုက်၍ ကားဦးပိုင်း မီးလောင် လူနှစ်ဦးသေ ဆုံး
စစ်ကိုင်းခရိုင်၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ အလ္လကပ္ဖကျေးရွာနှင့် မြောင်းမြို့လမ်းခွဲ အနီး မုံရွာ - မန္တလေး ကားလမ်းပေါ်တွင် ယခုလ ၁၉ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီခွဲအချိန်ခန့်က (၁၂)ဘီး ဆီဘောက်စာယာဉ်တစ်စီး ယာဉ်ကျော်တက်ရာမှ လမ်းဘေးသစ်ပင်ဝင်တိုက်မိ ခဲ့ရာ ယာဉ်၏ ဦးပိုင်း မီးလောင်ကျွမ်းသဖြင့် ယာဉ်မောင်းသူနှင့် ယာဉ်နောက်လိုက်သူနှစ်စလုံး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ထိုနေ့ညက မုံရွာ - မန္တလေးဘက်သို့ ဦးတည်မောင်းနှင်းလာသော YGM -165724 Fuso (၁၂) ဘီး၊ ဆီဘောက်စာ အမျိုးအစား ယာဉ်အမှတ် 000000 အား မုံရွာမြို့၊ ကွေ့ကြီးရပ်နေ ကိုဇင်မင်းထွန်း အသက်(၂၆)နှစ် ဆိုသူမှ မောင်းနင်းလာခဲ့ ရာ ကင်တာပုံပြောင်း ဒိုင်နာယာဉ်တစ်စီးအား ယာဉ်ကျော်တက်စဉ် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းဘေးသစ်ပင်သို့ ၀င်ရောက် တိုက်မိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မလေးရှားကုန်စည်ပြပွဲမှ ပေးအပ်သည့် Explore Quest Winner နှင့် အခြားဆုငါးဆု လှအဉ္ဇလီတင့်ဆွတ်ခူး
မလေးရှားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပသည့် ကုန်စည်ပြပွဲမှပေးအပ်သည့် Explore Quest Winner ဆုနှင့်အခြားဆု ငါးဆုကို မြန်မာကိုယ်စားပြုအဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့သည့် မင်းသမီးလှအဉ္ဇလီတင့်ကဆွတ်ခူးခဲ့သည်။ ၎င်းဆုကို အာဆီယံနိုင်ငံနှင့် မလေးကျွန်းဆွယ်နှစ်ခုတို့မှ ကိုယ်စားပြုတက်ရောက်လာကြသူများထဲက ရွေးချယ်ကာ ပေးအပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ချောဒီဆုရရှိတာက သူတို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာစူးစမ်းနိုင်တာရယ်၊ သူတို့မေးသမျှကို ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ တာနဲ့ အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ခဲ့လို့ ပေးအပ်တာလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆုပေးမယ်မှန်းလည်း မသိပါဘူး။ တကယ့်ကို အံ့အားသင့်သွားတယ်” ဟု လှအဉ္ဇလီတင့်ကဆိုသည်။
မလေးရှားမှ ပွဲတာဝန်ခံများသည် အာဆီယံနှင့် ကျွန်းဆွယ်နိုင်ငံတို့မှ တက်ရောက်လာကြသူများကို အဖွဲ့ ၁၄ ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ဒေသတွင်းယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်များကို လေ့လာစေခဲ့သည်။ ယင်းသို့အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လှအဉ္ဇလီတင့်သည် ခေါင်းဆောင်အ ဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပြီး ၎င်း၏အဖွဲ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက်ရောက်လာကြသူသုံးဦးနှင့်အတူ စင်ကာပူ၊ လာအို၊ မီဒမ် (အင်ဒိုနီးရှားမြို့ရှိ ကျွန်းဆွယ်မြို့) ကိုယ်စားပြုတက် ရောက်လာကြသည့် မင်းသမီးများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။
ယင်းပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၇ ရက်အထိ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး Tourism Malaysia မှ ပထမဆုံးအကြိမ် ဦးစီးကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းမလေးရှားခရီးစဉ်ကို ဒေသတွင်း နိုင်ငံများတွင် လည်း ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်နိုင်ရန် စီစဉ် ထားကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ မင်းသမီး လှအဉ္ဇလီတင့် နှင့်အတူ သူမ၏မန်နေဂျာ၊5 Net Work မှ ရိုက်ကူးသူတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
Facebook တွင် သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်များဖြင့် လူသိများလာသည့် မေမြတ်မွန် (ဓာတ်ပုံ – မေမြတ်မွန် / Facebook)
သိပ်မကြာသေးခင် ကာလက ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ပြန်ဆိုတေး ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြောင်း တဟုန်ထိုး လူသိများလာသူ၊ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်လာရသူတဦး ရှိပါတယ်။ သူကတော့ သြတြေးလျနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ အသက် ၂၈ နှစ် အရွယ်ရှိ မေမြတ်မွန်ပါ။ မေမြတ်မွန်ရဲ့ Facebook မှာ မြန်မာသံ တေးသီချင်း၊ ခေတ်ပေါ် သီချင်း၊ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ပြန်လည် သီဆိုထားရုံမက သူ့မရဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ဗဟုသုတဆိုင်ရာ အကြောင်းတွေကိုပါ ပြောပြ၊ ဖတ်ပြထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ပေါင်း ၈၈ ဖိုင်လောက် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မေမြတ်မွန်ရဲ့ သီချင်းဆို ပိုင်နိုင်ရုံတင်မက သူမရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကြောင့်လည်း လူသိများလာတာ၊ အငြင်းပွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကတည်းက ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ မေမြတ်မွန်ဟာ လက်ရှိမှာ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသားတဦးနဲ့ လက်ထပ်ထားပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Facebook မှာ ရုတ်တရက် နာမည်ကြီး လူသိများလာတဲ့ မေမြတ်မွန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ သိချင်နေတဲ့ အွန်လိုင်းပရိသတ်တွေအတွက် မေမြတ်မွန် သီချင်းတွေ ဆိုဖြစ်ပုံနဲ့ သူမရဲ့ အကြောင်းတွေကို မစပ်စုက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မေး။ ။ အခု မေမြတ်မွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက ဘယ်ကာလလောက်ကတည်းက စလုပ်ပြီး Facebook မှာ တင်ဖြစ်နေတာလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တွေက Facebook စသုံးကတည်းက တင်ဖြစ်တာ တနှစ်၊ နှစ်နှစ်လောက် ကြာနေပါပြီ။ အဲ့ဒီကတည်း ကိုယ့်အားလပ်ရက်ကလေးတွေမှာ သွင်းပြီးတော့ လုပ်စရာရှိတာ လုပ်ထားတာပေ့ါ။ မနက်ပိုင်းဆို သီချင်းက ဆိုချင်စိတ်ဖြစ်လာပြီ။ အပျော်ပေ့ါနော်။ တခါတလေကျရင် သီချင်းက မှန်တာလည်း မရှိဘူး။ မှားတာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အပျော်သဘောပဲလေ။ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်တွေလည်း ပေးချင်တယ်။
မေး။ ။ ဒါဆို စတင်တင်ချင်းမှာ ဘယ်သူမှ သတိမထားမိသေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား။ ဒီလောက် နှစ်နဲ့ချီ ကြာခဲ့ပြီး အခုမှ Facebook မှာ like ကြ share နေကြတာ ဘာကြောင့်လို့ ထင်မိလဲ။
ဖြေ။ ။ စတင်တင်ချင်းကို အဲဒီလောက်အထိ Share တာတွေ ဘာမှမရှိသေးဘူး။ ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းကို ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို ပျံ့သွားလဲ မသိဘူး။ တဟုန်ထိုးကြီး ဖြစ်သွားတာ။ ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းကိုပဲ သူငယ်ချင်းပေါင်း ၅ ထောင်ရလာတာ။ ဖြစ်ချင်တော့လည်း ၀ုန်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ Share ကြတော့တာပဲ။ ကိုယ်လုပ်နေတာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေ ကတည်းကပါ။ ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာမှ သူငယ်ချင်းပေါင်း ၅ ထောင်က လာ Add ကြတာပါ။ ကျမကလည်း မာန မကြီးဘူးလေ။ အကုန်လုံးကို လက်ခံတယ်။
မေး။ ။ တချို့သူတွေရဲ့ Comment တွေမှာ တွေ့ရတာက မေမြတ်မွန် အခုလို သီချင်းတွေ ဆိုဖြစ်နေတာ စိတ်ထွက်ပေါက် တခုအနေနဲ့ လုပ်နေတာလား ဆိုတဲ့အပေါ် ဘယ်လို သုံးသပ်ချင်လဲ။
ဖြေ။ ။ ခံစားချက် ဆိုတာကတော့ အမြဲရှိနေတာပဲလေ။ ဥပမာ ကိုယ့်အမေနဲ့ဆိုလည်း ခံစားချက်တခုက ဖြစ်လာတယ်။ ကိုယ့်ရည်းစားနဲ့ဆိုလည်း ခံစားချက်တခုပေ့ါ။ ကိုယ်နဲ့နေ့စဉ် ထိတွေ့နေတဲ့ လူတိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကိုယ့်မှာ ခံစားချက် တမျိုးစီရှိတယ်။ အဲဒီ ခံစားချက်လေးတွေကို ဖော်ထုတ်ပြလိုက်တာ။ ဒါတွေက သူများလည်း သိတယ်။ သူများတွေမှာလည်း ရှိမှာဘဲ။ နေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့ လူတွေနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်လာသမျှ ခံစားချက်တွေကို ကိုယ်က သီချင်းလေးနဲ့ ဖော်ထုတ်လိုက်တာ။ အံဝင်ခွင်ကျ သီချင်းလေးတွေကလည်း ရှိနေတယ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့ သီချင်းပေ့ါနော်။ ကိုယ်ကလည်း အမြဲတမ်း အိမ်မှာဆိုနေတော့ သီချင်းတွေကလည်း ရနေတယ်။ အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြန်ဖျော်ဖြေလို့ ရတာပေ့ါနော်။
မေး။ ။ မေမြတ်မွန်ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပြောပြပေးလို့ရမလား။
ဖြေ။ ။ ကျမ ပထမ ခင်ပွန်းနဲ့ အသက် ၁၇ နှစ်မှာ လက်ထပ်ပါတယ်။ ၁၈ နှစ်မှာ သားလေးကို မွေးတယ်။ အသက် ၂၂ နှစ်မှာ သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တယ်။ သူကတော့ သင်္ဘောအင်ဂျင်နီယာပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ခြေထေက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်ချင်လို့၊ သူများလုပ်စာ ထိုင်မစားချင်ဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ဖာသာ ရှာမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ သြစတြေးလျကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ သြစတြေးလျကို ကျမရဲ့ အမေက အရင်ရောက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျမနဲ့ ကျမ မောင်လေးကို ခေါ်လိုက်တယ်ပေ့ါ။ သားလေးကိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ ထားခဲ့ရတာပေ့ါ။ အခု သူ့အဖေနဲ့ ရန်ကုန်မှာ နေပါတယ်။ သူ့အဖေကလည်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုထားပါတယ်။ ဒီ သြစတြေးလျရောက်ပြီး တနှစ်ကြာတော့ ကျမ လက်ရှိ ခင်ပွန်းနဲ့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တယ်။ သူ့မှာက ကလေး ၃ ယောက်ရှိတယ်။ သူက တခါမှ လက်မထပ်ထားဘဲ ပထမအမျိုးသမီးနဲ့ အတူနေပြီး နောက်တော့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီး တော်တော်ကြာတော့ ကျမနဲ့တွေ့တယ်။ ကျမနဲ့ ချစ်ပြီး ၄ နှစ်ကြာတော့ ကျမတို့ လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်။ သူက လက်သမားပါ။ Kitchen တွေ ဆောက်တယ်။ သူက ကျမကို အရမ်းချစ်တယ်။ နားလည်တယ်။ ဘာလုပ်လုပ် သည်းခံတယ်။ ကျမကလည်း သူ့ကို သနားတယ်။ စာနာတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း လက်ထပ်ဖြစ်သွားတာပါ။
မေး။ ။ အခုလို သီချင်းပေါင်း မနည်းမနောကို ပြန်ဆိုနေတာ တွေ့ရတော့ ဒီအဆိုအနုပညာနဲ့ ရှေ့လျှောက် တေးစီးရီး ထုတ်တာတို့ Professional အဖြစ် လုပ်သွားဖို့ရှိမလား။
ဖြေ။ ။ ကျမ မသေမချင်း သီချင်းကတော့ ဆိုသွားဦးမှာပါပဲ။ ဒါဟာ ကျမရဲ့ Favourite အဖြစ်ဆုံး ၀ါသနာဆိုတော့ ဆိုသွားမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် စီးရီးထုတ်တယ် မထုတ်တယ် ကိစ္စကကျတော့ ကျမမှာ အခွေထုတ်ဖို့အတွက် အရင်းအနှီး မရှိပါဘူး။ သူက အများကြီးလိုတယ်။ အဲဒီအတွက် ကျမ မထုတ်နိုင်ပါဘူး။ သီချင်းလေးတွေ ဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လးတွေကို Facebook မှာ တင်မယ်။ ဒီလောက်ပါပဲ။ Professional လုပ်ဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေခဲ့တုန်းကရော အခုလို အဆိုပညာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘာတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့တာရှိလဲ။ ဥပမာ- သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေ ၀င်ပြိုင်တာတို့လိုမျိုးပေ့ါ။
ဖြေ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေခဲ့တုန်းကတော့ စတာကတော့ ရပ်ကွက်ပိုင်းက စတာပေ့ါနော်။ ရပ်ကွက်ထဲက လွတ်လပ်ရေးနေ့ဆို သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲရှိတယ်။ အဲဒီမှာ ၃ နှစ်ပြိုင်တယ်။ ၃ နှစ်လုံး ဆုရပါတယ်။ ပထမနှစ်မှာ ဒုတိယဆု၊ ဒုတိယနှစ်မှာ ပထမဆု၊ တတိယနှစ်မှာ ပထမဆု ရတယ်။ နောက်နှစ်ကျတော့ ရပ်ကွက်လူကြီးက ပြောတယ်။ Presenter ပဲ လုပ်တော့ပါတဲ့။ ဒီနှစ်လည်း နင်ရဦးမှာပဲဆိုပြီး ပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ အပျော်လေးပဲ ဆိုပြီး Presenter ပဲ လုပ်တယ်ပေ့ါ။ အဲဒီနောက် ၂၀၀၂ ခုနှစ်က City FM ရဲ့ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှာ အယ်လ်ဆိုင်းဇီရဲ့ မိုးရာသီထဲ သီချင်းနဲ့ ဒုတိယဆု ရခဲ့တယ်။ နောက် မြန်မာ့အသံလား MRTV-4 လားဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲဒီမှာ ပြိုင်ပွဲတခု လုပ်တယ်ဆိုလို့ သွားဝင်ပြိုင်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆုမရပါဘူး။
မေး။ ။ အဲဒီတုန်းကရော Professional ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်တာလား။ အပျော်တမ်းအနေနဲ့ပဲ ၀င်ပြိုင်ဖြစ် ခဲ့တာလား။
ဖြေ။ ။ အဲဒီတုန်းကတော့ ငယ်သေးတော့ Professional ဖြစ်ဖို့အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရှိတာပေ့ါ။ ဒီလောက် ၀ါသနာပါတာ။ သူများ စီးရီး ထုတ်ပေးရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှာပဲပေ့ါ။ အဲလိုမျိုးနဲ့ ပြိုင်တာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် မရပါဘူး။ ဘယ်သူမှလည်း စိတ်မ၀င်စားကြဘူးလေ။ အဲဒါနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ ဒီဘက်ကို ထွက်လာတာ။
မေး။ ။ အရင်က အဆိုတော် အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့ အိပ်မက်ခဲ့စဉ်တုန်းက ဘယ်သူမှ စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ဘဲ အခုမှ မေမြတ်မွန်ကို စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါက ကံပေ့ါနော်။ ကံကောင်းတဲ့အချိန်လို့ ပြောရမှာပေ့ါ။ အားလုံးက ချစ်ပြီးတော့ အားပေးကြပါတယ်။ တချို့ ဆဲတဲ့သူက ဆဲနေပေမယ့် ချစ်တဲ့သူက ချစ်ကြတော့ ဒါ ကံပဲလို့ သဘောထားပါတယ်။ ပျော်လည်းပျော်ပါတယ်။ လုပ်ရကျိုးလည်း နပ်ပါတယ်။
မေး။ ။ မေမြတ်မွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တချို့မှာ မေမြတ်မွန်ရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုမြင်ပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ဒါကတော့ လုပ်ယူလို့ မရဘူးလေ။ သူ့အမြင်နဲ့ ကိုယ့်အမြင်မတူဘူးလေ။ ကိုယ်က မြန်မာသီချင်းတွေ ဆိုနေတာဆိုတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ဆင်ခြင်ရမယ်လို့တော့ မြင်မိပါတယ်။ နောက်ဆို သူတို့ မကြိုက်တာတွေလည်း မ၀တ်တော့ပါဘူး။ ဘာမကြိုက်ဘူးလဲဆိုတာ သိသွားတာပေ့ါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူများကိုလည်း စိတ်ဒုက္ခ မပေးချင်ဘူးလေ။ နောက် ကိုယ့်ဘက်က ဆင်ခြင်ရုံပဲရှိပါတယ်။ အရွဲ့တိုက်ဖို့လည်း စိတ်ကူးမရှိဘူး။ စိတ်ဆိုးဖို့လည်း စိတ်ကူးမရှိပါဘူး။ ဒါ သူ့အမြင်ပဲလေ။ သူက ဒီမှာနေရင် ဒီလိုပဲ မြင်မှာပဲ။ ကိုယ်က ဒီဘက်မှာနေလို့သာ ဒီလိုမြင်နေပေမယ့် သူက သူ့နိုင်ငံထဲမှာဆိုတော့ ဒီလိုပဲ မြင်ကြမှာပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် ဘာမှ ပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဝေဖန်ကြပါစေ။
မေး။ ။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း Facebook မှာ အခုလို သီချင်း ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ ဆက်တင် ဆက်လုပ်သွား ဖို့ရှိမလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူအားပေးပေး မပေးပေး ကိုယ့်ဖာသာ ကြည့်ဖြစ်တယ်လေ။ ကိုယ့်ဖာသာ အားပေးတယ်လေ။ အစကတည်းက သူများအားပေးဖို့ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာကို ကြည့်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ဝါသနာ အရပါ။ ကိုယ်ရဲ့ မှတ်တမ်းပေ့ါ။ ကိုယ်အသက်ကြီးလာရင် ပြန်ကြည့်ရအောင်လို့ ကိုယ်ဘာတွေ ဆိုခဲ့လဲ။ ဒီသီချင်းလေးတွေကို ပြန်ပြီး ကိုယ်အသက်ကြီးလာရင် ပြန်နားထောင်ရအောင်လို့ ဒီသီချင်းတွေကိုတော့ အမြဲတမ်းဆိုသွားမှာပါပဲ။ Favourite ဖြစ်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကို ကိုယ့်ဖိုင်ထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့သဘောပါပဲ။ ကြိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း နားထောင်နိုင်တာပေ့ါ။ ဒီသဘောပါပဲ။
မေး။ ။ Facebook ကနေ မေမြတ်မွန်ကို သူတို့ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေ သီဆိုပေးဖို့ တောင်းဆိုတာတွေရော ရှိလား။ အခုနောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းပေါင်း ၅ ထောင်နီးပါး ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ သူတို့ တောင်းဆိုတာတွေရော ဆိုပေးဦးမှာလား။
ဖြေ။ ။ တောင်းဆိုပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတွေက တောင်းဆိုကြတယ်။ တခါတလေ သူတို့ တောင်းဆိုတဲ့သီချင်း ကိုယ်မရတာလည်း ရှိရင် မဆိုဘူးပေ့ါနော်။ ဒါပဲနားထောင်ပေ့ါ။ ဒါပဲရတယ်လို့ ကျမကတော့ ပြန်ပြောတာပဲ။ သူတို့လည်း ကျေနပ်ပါတယ်။ သူတို့လည်း ရတာကို နားထောင်တယ်။ ဘယ်သူမှ ချေးမများဘူး။ နောက်ပိုင်း သူငယ်ချင်းတွေ တောင်းဆိုတဲ့ သီချင်းတွေလည်း ဆိုပေးမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်ရထားတဲ့ သီချင်းတွေက ပြောရမယ်ဆိုရင် အများကြီးလေ။ ကိုယ်က ဆိုပေးချင်တယ်။ အခုဆိုရင် ပျော်တယ်။ သူငယ်ချင်း ငါးထောင်ဆိုတော့ တယောက်ကို တပုဒ်နှုန်းနဲ့ဆိုပေးဦး။ အပုဒ်ရေငါးထောင် ဆိုလို့ရပြီ။ အရမ်းပျော်တယ်။
မေး။ ။ ဒါဆို မေမြတ်မွန်ရဲ့ အိပ်မက်က သီချင်းဆိုနေရရင်ပြီးရော ဆိုတာလား။
ဖြေ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်။ သီချင်းဆိုနေရရင် ပြီးပြီ။
မေး။ ။ Blog တွေ၊ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာ မေမြတ်မွန်ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေတင် မဟုတ်ဘဲ မေမြတ်မွန် ဘာလုပ်နေလဲ။ မေမြတ်မွန် အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ် စသဖြင့် သတင်းတွေရေးကြ ပြောကြ ဆိုကြဆိုတော့ မေမြတ်မွန်ကို Celebrity တယောက်လို စောင့်ကြည့်ပြောဆိုနေကြတဲ့အပေါ် ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ။ ။ အခုက အဲလို အနေအထား ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ အရင်တုန်းကလိုတော့ ပရမ်းပတာ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ကို ထည့်စဉ်းစားရတော့မှာပေ့ါ။ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ကို စော်ကားမိမလား သူတို့ မကြိုက်တာများ လုပ်မိမလား။ အဲ့လိုပူပန်တာတွေ ရှိလာပါတယ်။ ပိုပြီး ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်ကိုယ် အကျင့်စရိုက်ကတော့ ဖျောက်လို့ မရဘူးပေ့ါနော်။ သူများကို မစော်ကားမိအောင်တော့ လုပ်ရမှာပါပဲ။ ဒါပါပဲရှင်။ ။
မစပ်စု| November 21, 2013
ဆက်စပ်သတင်း --- မေမြတ်မွန် သတင်းများ
ထိုး၊ ဓားနှင့်ခုတ် သည် ဖြစ်ရပ်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်ဈေး၊ လေးရပ်ကွက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရုံးမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ကျော်သူဇော် ၂၆ နှစ်၊ ဘုရားကုန်းကျေးရွာ၊ သန်လျှင်မြို့နယ် နေသူနှင့်၎င်း၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ
အောင်အောင် ၂၃ နှစ် ကြည့်မြင် တိုင်ဈေးလေး ရပ်ကွက် ရှိ အောင်အောင်၏တိုက်ခန်းတွင် ရှိနေစဉ် တိုက်ခန်း တံခါးတွန်း ဖွင့်၍လူတစ်ဦး ၀င်လာသဖြင့် “မင်းတို့ ငါ့ကို သိလား၊ နေလင်းအောင်ဆိုတာ ကြားဖူးလား” ဟု မေးရာ ဇော်ဇော်က မသိကြောင်း ပြောကြားစဉ် နောက်ထပ် လူ သုံးဦးထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့ ထဲမှတစ်ဦးက ဆာလာအိတ်ဖြင့်ပတ်ထားသော ဓားအားထုတ် ကိုင်၍ ၎င်းတို့နှစ်ဦးထိုင်ခိုင်းပြီးကျန် နှစ်ဦးမှ ကျော်သူဇော်၏ မျက်နှာအား လက်သီးဖြင့်ထိုး၍ အောင်အောင်အား ဓားရှည်နှင့် ခုတ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းရုံးမှသိရသည်။
ထို့ကြောင့် ကျော်သူဇော်၏ နှာခေါင်းတွင် သွေးထွက် ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီး အောင်အောင်တွင် ၀ဲဘက်ချိုစောင်းပြတ်ရှ ဒဏ်ရာဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း အနောက်ပိုင်းဆေးရုံကြီးတွင် ကုသနေရကြောင်း အဆိုပါရုံးမှသိရသည်။
တရားခံသုံးဦးအား ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ တိမ်းရှောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ယင်းအမှုအား ကြည့်မြင်တိုင် မမစ (ပ) ၇၅၂/၁၃၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၂၅/၃၂၆ဖြင့် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် သြစတြေးလျသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆွေးနွေးမည်
လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ရောက်ရှိလာသော NLD ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ငြိမ်းဇော်လင်း)
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် Tony Abbott၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Julie Bishop တို့နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ပြီး သြစတြေးလျရောက် မြန်မာများနှင့်လည်း တွေ့ဆုံမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် Sydney Opera House တွင် တက္ကသိုလ်သုံးခု ပူးပေါင်းပြုလုပ်မည့် ဘွဲ့အပ်နှင်းပွဲ အခမ်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည် ဖြစ်ကာ Australian National University နှင့် Monash University တို့တွင် ပညာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လေ့လာဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင်(၂၅)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့အေအိုင်ဒီအက်စ်နေ့ အခမ်းအနားကိုလည်း တက်ရောက်ရန် စီစဉ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်တွင် ပြန်လည် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ထားသော ခရီးစဉ် အစီအစဉ်အရ သိရသည်။
သြစတြေးလျခရီးစဉ်သို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အတူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိမ်းဆွေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဒေါက်တာတင်မာအောင်၊ ဆက်သွယ်ရေး တာဝန်ခံ ဦးမိုးဇော်ဦးတို့ လိုက်ပါမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။